आख्यानकार गगन सिंह थापाको छैठौ कृति महाप्रलयको बिमोचन – News Portal of Global Nepali
24/09/2020 मा प्रकाशित
लन्डन। आख्यानकार गगनसिंह थापाको छैठौ कृति महाप्रलयको आज बिमोचन भएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गंगा प्रसाद उप्रेतीले साहित्यकार थापाको छैठौं कृति महाप्रलयको आज भर्चुअल बिमोचन गरे ।
महाप्रलयको भर्चुअल लोकार्पण गर्दै उप्रेतीले नेपाली आख्यान क्षेत्रमा महाप्रलय बिशिष्ट कृति भएको चर्चा गरे । आख्यान भनेको बिराट जीवनको प्रस्तुती गर्ने कला हो, कृतिमाथि चर्चा गर्दै उप्रेतीले भने, महाप्रलयमा आख्यानकार थापाले बिराट जीवनलाई सुललित ढंगले पस्किनु भएको छ । त्यस कारण पनि यो कृति अरु आख्यानकारका कृतिभन्दा बिशिष्ट छ ।
आख्यानकार थापाले महाप्रलयको रचनाका सन्दर्भमा अल्वर्ट आईन्सटाईनसंग एक पत्रकारले गरेको जिज्ञासाको प्रसंग सुनाए । आईन्सटाईनलाई एक पत्रकारले सोधे–महाप्रलय कसरी हुन्छ ? उनले जवाफ दिए, शक्ति राष्ट्रको अहमता र दम्भबाट । आख्यानकार थापाले भने, महाप्रलय तिनै मानवता र माया नभएका दम्भी र अहमता भएका शक्ति राष्ट्रको अहंकार र उन्मादबाट निम्तिएको परिणामको चित्रण हो ।
आख्यानकार थापाले शक्ति राष्ट्रहरुको दम्भ र अहमताले महाप्रलय भएको र संसार रित्तिएको बताए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्याय महाप्रलय उपन्यासलाई महा उपन्यास र महाआख्यानको संज्ञा दिए । उनले भने, यस कृतिले समेत बिराट जीवन लाई उपन्यास होईन, महा उपन्यास र महाआख्यान भन्न मन लाग्यो ।
उनले महाप्रलयमा हिमालय (जाड क्षेत्र) र पर्वतीय (खसान क्षेत्र) समेटिएको कर्णालीको जडान र खसान सभ्यताको बीचको सम्बन्धका बिबिध पाटाहरुलाई पनि महाप्रलयले उजागर गरेको बताए ।
उनले आख्यानकार थापाका कृतिमा कर्णालीको छेउछाउका सिमान्तकृत समुदायका आवाजहरु मुखरित भएको बताए । साहित्यकार शाहले आख्यानकार थापाले कसैले नसुनेका र किनारा लगाईएका मान्छेका आवाज, गरीवी, पछौटेपनलाई लेखनको विषयवस्तु बनाएको चर्चा गर्दै थापाको कृतिमा महिलाहरुको उत्थान, आञ्चलिकता र समाजको सांस्कृतिक बिशिष्टता पाईने गरेको बताए ।
उनले आख्यानकार थापाको कृति महाप्रलयले साहित्यकारले भविश्यमा हुने क्षतिको अनुमान आफ्नो साहित्यिक सृजना मार्फत दिनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको बताए । प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले नेपालको ईतिहास, संस्कृतिलाई लिपिबद्ध गरेर प्रकाशन गरिएको महाप्रलय नेपाली साहित्यको ईतिहासमा उत्कृष्ट कृति भएको चर्चा गरे । प्रा.डा. पौडेलले खसान र जडान क्षेत्रको सभ्यता, ईतिहास र यसको महत्वलाई कुशलता पूर्वक महाप्रलयमा समेटिएको बताए ।
आख्यानकार थापाको भाषिक र गद्य लेखनको कला बेजोड भएको चर्चा गर्दै प्रा.डा. पौडेलले प्रेमका सन्दर्भहरुलाई आख्यानकार थापाले उच्च किसिमले प्रस्तुत गरेको बताए । यतिधेरै बिबिधता र जानकारी भएको कृति बिरलै हुन्छन, उनले भने, नेपालका विश्व विद्यालयकाहरुका पाठ्यक्रमका लागि आख्यानकार थापाको महाप्रलय उत्कृष्ट कृति हुन सक्छ ।
सभाअध्यक्ष थापाले भर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद दिदै आख्यानकार पीताका थप दुई कृति प्रकाशोन्मुख रहेको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण नयाँ शैलीमा भएको लोकार्पण समारोहका सभा अध्यक्ष थापा अफ्रिकाको नाईजेरियमा थिए । प्रमुख अतिथि, आख्यानकार थापा, कार्यक्रम सञ्चालक पौडेल र वक्ताहरु काठमाण्डौंमै थिए । त्यो पनि छु्टाछुट्टै स्थानमा ।